Global Voices teny Malagasy · 9 Novambra 2017
09 Novambra 2017
Tantara tamin'ny 09 Novambra 2017
Niaro An'ilay Mpanao Gazety Nogadraina ny Didim-pitsarana Makedoniana.
Afaka manantena fanafoanana ofisialy an'ireo fiampangana azy ara-politika ihany ilay mpanao gazety Makedoniana Tomislav Kezarovski nony farany, rehefa avy niady hahazo izany efa ho dimy taona.
Amerika Latina09 Novambra 2017
Ho avy ny Krisimasy. Manao topi-maso ny fihetsiky ny mpanjifa Shiliana mandritra ny fety ity lahatsoratra ity. Ary manoratra mikasika izay mety ho fanomezana ataon'ny Shiliana. Manoritsoritra ny fanomezana be mpivarotra indrindra i Luis Alarcon .
Jordania: Ny Bilaogin-dahatsarin'ny Mpanjakavavy Rania
Jordania09 Novambra 2017
Nosaloran'ny Blogger Times, gazetibokin'ny bilaogy tantanan'ireo bilaogera Arabo, ny anarana hoe "bilaogeran-dahatsary Arabo malaza indrindra " tao amin'ny YouTube ny mpanjakavavy Rania any Jordania taorian'ny fahombiazan'ireo andian-dahatsary tao amin'ny YouTube izay nalefany mba hiadiana amin'ny karazana fiheveran-diso mikasika ny Arabo.